Maxuu yahay dalabka cusub ee W/caafimaadka kasoo saartay tallaalka COVID-19? - Caasimada Online
Home Caafimaad Maxuu yahay dalabka cusub ee W/caafimaadka kasoo saartay tallaalka COVID-19?
Maxuu yahay dalabka cusub ee W/caafimaadka kasoo saartay tallaalka COVID-19?
Muqdisho (Caasimada Online) – Wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay waxay ku dalbatay in loo midoobo ka hortagga cudurka Coronavirus oo dhawaan dalka ku soo laba kacleeyey, sidoo kale la qaato tallaalka cusub ee cudurkaan.
Saacadihii u dambeeyey 187 qof oo qabta Coronavirus ayaa laga diiwaan geliyey Soomaaliya, sida lagu shaaciyey warbixinta maalin-laha ah ee wasaaradda caafimaadka, waxaana u dhimatay 14-ruux, halka 40 kale ay ka soo bogsadeen.